Sida loo sameeyo shumacyada: talooyinka iyo tabaha ugu fiican | Dib -u -cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 22/09/2021 10:00 | Dib u warshadaynta
Waxaan ognahay in qurxinta, shumacyadu ay yihiin fikrad aad u fiican. Gaar ahaan haddii ay yihiin udug. Waxay leeyihiin muuqaal qurxoon oo aad u qurux badan waxayna la jaanqaadaan isku -darka kala duwan ee suurtogalka ah. Waxaad u rogi kartaa meesha meel aad u soo dhoweyn leh oo aad abuuri karto qaab kugu habboon. Waxaa jira dad raba inay wax bartaan sida loo sameeyo shumacyada hab fudud oo waxtar leh.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa maqaalkan si aan tallaabo tallaabo ugu sheegno sida loo sameeyo shumacyada iyo astaamaha ay yihiin.
1 Shumacyada udugga leh
2 Sida loo sameeyo shumacyada guriga
3 Sida loo sameeyo shumacyada tallaabo tallaabo
Shumacyada udugga leh
Shumacyada udugga leh waxay leeyihiin caraf diirran, taas oo ah farqiga u dhexeeya meel si qurux badan loo qurxiyay iyo guri diirran, saaxiibtinimo leh. Iyaga, waxaan ku beddeli karnaa deegaan kasta meel nasasho iyo sixir leh, annaga oo kicineyna waqtiyo iyo meelo kale. Sababtaas awgeed, shumacyada udgoonku waxay noqdeen hal shay oo kale oo ka mid ah qurxintayada waana hadiyad aad u wanaagsan oo lagu bixiyo Kirismaska ​​ama waqti kasta oo kale oo sannadka ah.
Laakiin intaas kuma ekaan: shumacyadu waxay kaloo astaan ​​u yihiin cusboonaysiinta, iftiiminta iyo isdaahirinta. Tani waa sababta loogu isticmaalo si joogto ah caadooyinka kala duwan ee asluubta ee adduunka oo dhan oo loo isticmaalo in lagu dhiirrigeliyo fekerka ama in la abuuro jawi soo jeedin iyo jaceyl badan. Intaa waxaa dheer, iyada oo ku xidhan udgoonkooda, waxay sidoo kale yeelan karaan saamaynta firfircoonida, dheef -shiid kiimikaadka, nasashada ama kicinta dhexdeena, iyo kor u qaadida shucuurta qaarkood.
Taariikhda shumacyadu waxay soo bilaabatay bilowgii ilbaxnimadii ugu horreysay. Laga soo bilaabo shumacyada saliidda Roomaanka ilaa waxsoosaarka kale ee aadka u fiican ee laga sameeyay tallow, soosaarka dhirta, ama Masaaridii isticmaashay laamo dhoobo ah oo lo 'ama wan ah. Dhammaan dhaqammadaan, Waa dariiqa ugu weyn ee iftiiminta waxaana sidoo kale loo adeegsadaa xafladaha diinta iyo allabaryada.
Jiritaankeeda oo astaan ​​u ah Christmas -ka ayaa sidoo kale leh taariikh boqolaal sano ah. Shumacyada waxaa loo adeegsadaa in lagaga gaashaanto jinniyo shar leh oo si tartiib tartiib ah u noqdaan mid ka mid ah waxyaabaha caadiga ah ee ciidahan. Dhab ahaantii, waxaa jira caddayn in qarnigii XNUMX -aad shumacyo lagu dhajiyay geedaha kirismaska ​​ee Jarmalka si loo qurxiyo qolka.
Laga bilaabo helitaankii shidaalka 1850kii, shumacyadu waxay ka samaysnaayeen paraffinGoor dambe, markii shidaalka iyo korontadu ka soo muuqdeen guryaheena, wax walba way is beddeleen. Sidan ayay shumacdu u qaadataa sharraxaad quduus ah oo qurxoon oo udgoon leh, ma aha oo keliya aalad iftiin leh.
Sida loo sameeyo shumacyada guriga
Haddii sixirka shumacyadu uu sidoo kale ku cajab geliyo, markaa waxaad hore u ogtahay in ay suuqa ku jiraan kumanaan moodallo, qaabab, cabbirro iyo midabyo kala duwan ah. Si kastaba ha ahaatee, iyaga ayaa sidoo kale lagu samayn karaa guriga, waxayna dhab ahaantii yihiin farsamo fudud oo asal ah oo ku habboon hadiyad ahaan. Aan aragno waxa ay yihiin agabyada lagama maarmaanka ah ee loo baahan yahay si loo barto sida loo sameeyo shumacyada:
Dhoobada la safeeyey ama saabuunta paraffin (Waxaad ka heli kartaa dukaamada farsamada gacanta ama internetka.) Qaddarku wuxuu ku xiran yahay shumaca aad rabto inaad samayso iyo xajmigeeda.
Midabka, codka aad dooratay.
Hal ama dhowr caaryaal si aad u qaabeyso shumacaaga.
Nuxurka udugga. Waxaad isticmaali kartaa saliidaha lagama maarmaanka ah, laakiin hubi inay yihiin kuwa ugu tayada hooseeya haddii kale ma heli doontid natiijooyin wanaagsan.
Weel wax dhalaalay usha hagaha (iyagana waxaa lagu iibiyaa onleenka iyo dukaamada khaaska ah), sabuurad alwaax ah iyo suuf (qaddarku wuxuu ku xiran yahay shumaca aad rabto inaad samayso).
Sida loo sameeyo shumacyada tallaabo tallaabo
Waxay qaadataa waqti in la barto sida loo sameeyo shumacyada udugga leh, laakiin ma aha mid adag. Kaliya iska hubso inaad raacdo tillaabooyinka hoose:
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso waa in lagu shido shamac digsi, kuleyl dhexdhexaad ah ama hooseeya, ilaa uu si fiican u dhalaalay. Fikrad fiican ayaa ah in lagu sameeyo qubayska biyaha (weelka ku shub dheri weyn) oo ku walaaq walaaq.
Kadib, markay wax -qabadku yara yaraato, ku dar midabaynta cuntada iyo dhawr dhibcood oo dhadhanka aad doorbidayso. Ka taxaddar inaadan ku badin, haddii kale udugga aad bixinayso wuxuu noqon doonaa mid aad u xoog badan oo xanaaq badan.
Marka xigta, waa waqtigii la qaabayn lahaa: ku shub shamii dhalaalay, dhadhanka iyo midabka leh caaryada aad dooratay (marka hore, ha ilaawin inaad saliidda hoosta iyo dhinacyada caaryada ku mariso dhibic saliid karis ah).
Kadib ku xidh shamacda shumaca oo ku xidh dhammaadka shumaca usha hagaha. Waxaad arki doontaa daloolka usha oo aad ka dhex geli karto suufka oo aad u gudbin karto dhinaca kale ee caaryada. Laalaabyada qaarkood waxay la yimaadaan saldhig siman oo si fudud loogu hagaajin karo shumacyadeenna, gaar ahaan haddii aan rabno inaan ku ridno weel.
Ugu dambeyntii, gooyaa caaradda usha, hubi inaad ka tagto gabal dushiisa si aad u shiddo dhibaato la'aan.
Hadda waa waqtigii la oggolaan lahaa in shamku qaboobo, hawshani waxay qaadan kartaa dhowr saacadood. Si loo yareeyo waqtiga sugitaanka, waa in lagu meeleeyaa meel qabow oo mugdi ah oo ka fog iftiinka qorraxda.
Haddii aad rabto inaad shumacyada ka furto (tusaale ahaan, waxaad kaloo dooran kartaa inaad kaga tagto dhalooyinka ama dhalooyinka dhoobada ah), dib ugu celi caaryada oo ku dheji farahaaga ama qalin si aayar aayar hawada uga saartid oo tartiib tartiib u samee. ka baxsan caaryada, tani waxay ka hortagtaa shumaca inuu jabo ama jabo.
Shumacyada guriga lagu sameeyo badiyaa ma keenaan khatar aad u daran, laakiin waa inaan xusuusnaano inaan isticmaaleyno paraffin, oo ah badeecad guban karta, markey noqoto dareere, waxay gaari doontaa heerkul aad u sarreeya. Sidaa darteed, waxaa mar walba lagula talinayaa in la raaco taxaddarrada soo socda:
Waxaa lagugula talinayaa inaad xidhato galoofyada iyo muraayadaha difaaca.
Weligaa dabka ha ka tegin adigoo aan ilaalin.
Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho heerkulbeegga jikada si loo xaqiijiyo inaanan dhaafin xadka dabka gubi kara mar kasta.
Haddii shamac dab qabsado, ku dabool digsiga maro oo damso gaaska. Ha ku darin biyo duruuf kasta, maxaa yeelay tani waxay dhiiri gelinaysaa holaca oo kaliya.
Ugu dambayn, ku dheji maacuunta aad shumacyada ku samayn jirtay. Xaalad kasta ha ku darin cunto ay ku karsadaan.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto sida shamaca loo sameeyo tallaabo tallaabo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Dib u warshadaynta » Sida loo sameeyo shumacyada